5 Ɛnna Filistifo no faa nokware Nyankopɔn adaka+ no, na wɔde fi Ebeneser kɔɔ Asdod.+ 2 Na Filistifo no de nokware Nyankopɔn adaka no kɔɔ Dagon fie, na wɔde kosii Dagon+ nkyɛn. 3 Na ade kyee a Asdodfo sɔree anɔpatutuutu no, na Dagon ahwe ase ma n’anim butuw fam Yehowa adaka no anim.+ Enti wɔmaa Dagon so, na wɔsan de no sii ne sibea.+ 4 Na ade kyee, da a edi hɔ a wɔsɔree anɔpatutuutu no, hwɛ, na Dagon ahwe ase a n’anim butuw fam Yehowa adaka no anim; ná Dagon ti ne n’abakɔn abien no atetew gugu kwan ano.+ Ne kuntunsin a ɛte sɛ apataa no nko na ɛkae. 5 Ɛno nti na ɛde besi nnɛ no, Dagon asɔfo ne wɔn a wɔkɔ Dagon fie nyinaa ntia Dagon apongua a ɛwɔ Asdod no so no. 6 Na Yehowa nsa+ yɛɛ den Asdodfo so, na ɔmaa wɔn ho popoe na ɔmaa kooko+ fifii wɔn, kyerɛ sɛ Asdod ne ne mpɔtam hɔfo. 7 Bere a Asdodfo behui sɛ aba saa no, wɔkae sɛ: “Mommma Israel Nyankopɔn adaka no nntena yɛn nkyɛn, efisɛ ne nsa ayɛ den yɛne yɛn nyame Dagon so.”+ 8 Enti wɔsoma kɔboaboaa Filistifo ahene no nyinaa ano baa wɔn nkyɛn, na wobisae sɛ: “Dɛn na yɛnyɛ Israel Nyankopɔn adaka no?” Ɛnna wɔkae sɛ: “Momfa Israel Nyankopɔn adaka no nkɔ Gat.”+ Enti wɔde Israel Nyankopɔn adaka no kɔɔ hɔ. 9 Wɔde kɔɔ hɔ no, ɛbae sɛ Yehowa nsa+ baa kurow no so maa wɔn ho yeraw wɔn papaapa, na ɔbobɔɔ kurom hɔfo, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, na kooko+ fifii wɔn. 10 Enti wɔde nokware Nyankopɔn adaka no kɔɔ Ekron.+ Bere a nokware Nyankopɔn adaka no duu Ekron no, ɛhɔ ara na Ekronfo no teɛteɛɛm sɛ: “Wɔde Israel Nyankopɔn adaka no aba yɛn nkyɛn de rebekunkum yɛn ne yɛn man!”+ 11 Enti wɔsoma kɔboaboaa Filistifo ahene no nyinaa ano, na wɔkae sɛ: “Momfa Israel Nyankopɔn adaka no mfi ha nsan nkosi ne sibea, na ankum yɛn ne yɛn man.” Nea ɛte ne sɛ, ná ahoyeraw a ekum nnipa asi kurow no mu nyinaa.+ Nokware Nyankopɔn nsa yɛɛ den paa wɔ hɔ,+ 12 na kurow no mufo a wɔanwuwu no, kooko+ fifii wɔn, na kurow no sufrɛ+ foro koduu ɔsoro.